Iyo nyowani vhezheni yeSailfish OS 3.2.1 yakatoburitswa uye ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo | Linux Vakapindwa muropa
Jolla akazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yeSailfish 3.2.1 inoshanda sisitimu. Kune avo vachiri kusaziva nezve Sailfish OS vanofanirwa kuziva chiie izvi zvinoshandisa girafu rakatarwa zvichibva Wayland uye Qt5 raibhurari, mamiriro ezvinhu ehurongwa akavakirwa panheyo yeMer, iyo yakagadziriswa sechikamu chakakosha cheSailfish kubva munaKubvumbi, uye mapakeji eNemo.
Mushandisi goko, epamberi mafoni ekushandisa, zvikamu Silica QML yekuvaka Android GUI, Android application kuvhura nhete, injini yekuisa mavara uye iyo data yekuenzanisira system ndeyako, asi kodhi yayo yakanga yakarongwa kuvhurwa muna 2017.
1 Chii chitsva muSailfish OS 3.2.1?
1.1 Tora Sailfish OS 3.2.1
Chii chitsva muSailfish OS 3.2.1?
Mune vhezheni itsvan vagadziri vakawedzera chinongedzo chekushandiswa kweiyo HTTPS yekubatanidza kukero bar yebrawuza, iyo tsamba mutengi ikozvino inokwanisa kudzosera mameseji neHTML markup sechisungo, pamwe ne kutsigira maakaundi muNextCloud gore rekuchengetedza (ichagadziriswa mune inotevera vhezheni).
Imwe shanduko mushanduro iyi nyowani ndeyekuti Android inoenderana dhata yakagadziridzwa kune Android 8.1 chikuva, pamwe nekuvandudzwa kwenzwi muApple maapplication neiyo matambudziko neWhatsApp neYouTube akagadziriswa.
Remote manejimendi yefoni nhare (MDM, Chishandiso Management) inowedzera VPN yekugadzirisa manejimendi kuburikidza neConnman uye kugona kuvhara browser.
Yakawedzerwa tsigiro yemhando yeCSV kunyora muoni, Tsigiro yeXLSX neRTF yakagadziridzwa, matambudziko nekumiririrwa kweCyrillic yedata muRTF akagadziriswa.
In the mutumwa, meseji yekuratidzira meseji yakagadzirwazve uye iyo interface yakagadziridzwa kuratidza ruzivo rwakadzama.
Vakadaro yakagadzirisa matambudziko nekushandisa SSH pamusoro peUSB mune yekuvandudza modhi. Kubatanidza kuburikidza neSSH, kiyi yechokwadi inoshandiswa panzvimbo yemudzidzi wemidzi
Fixed issues ne Twitter uye Nextcloud account.
Yakagadziriswa nyaya neAlexSync mukarenda kuronga.
Wakawedzera kugona kushandisa iprange uye ip-based kuenzanisa kunoenderana neGRE protocol (kusefa mapaketi paPPTP).
Rutsigiro rwunopihwa rwekugonesa modhi yekuvandudza mukushaikwa kweinternet yekubatanidza uye Jolla account.
Iyo midhiya inoridza inopa yakasimba dudziro yehodhi codecs.
Yakagadziriswa rutsigiro rweNFC SmartPoster ma tag.
Yakagadziriswazve interface dhizaini yekufona.
Yakagadziriswazve tab misoro.
Kuvandudzwa kwekubata kweVPN kubatanidza uye kuzivikanwa kwekutendeseka kwekukanganisa kweVPN.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweL2TP VPN, PPTP VPN, OpenConnect, uye OpenVPN.
Akaenderera mberi nekugadzirisa dhizaini dhizaini yekutumira mameseji.
Yakagadziridzwa karenda kuronga kuronga pamwe neGoogle Calendar.
Iyo yekuona gwaro ikozvino inozviona yega kukodha mumavara mafaira.
Kurongeka kwemunda pamwe nematanho ekutumira kwashandurwa mune yevatengi tsamba.
Sony Xperia zvishandiso zvinotsigira h.265 Hardware vhidhiyo kududzira (HEVC).
Iyo Xperia 10 chishandiso inokwanisa kunyorera chikamu chine mushandisi data
Chikamu chine marongero ekunyorera chakawedzerwa kumisangano ("Zvirongwa> Encryption").
Tora Sailfish OS 3.2.1
Iyi vhezheni nyowani yeSailfish OS 3.2.1 kusangana kwayo kwakagadzirirwa zvishandiso Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, Xperia XA2, Gemini, Sony Xperia 10 uye vatovepo muchimiro chekuvandudza kweOTA.
Kuti uite izvi, ingoenda ku Kugadziridza - Sailfish inoshanda sisitimu inogadziridza, pano iwe unofanirwa kupuruzira pasi kuti uwane yekuvandudza (kana parizvino uine vhezheni yekare yeanoshanda, shandisa menyu «Zvirongwa - Ruzivo - Nezve chigadzirwa. Nezvo, iyo vhezheni nyowani inofanirwa kuoneka kuitira kuti vagone kugadzirisa kune iyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo nyowani vhezheni yeSailfish OS 3.2.1 yakatoburitswa uye ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo
Mhoroi, ndakatakura iyo yemahara vhezheni uye ndakaifarira… kunyangwe ini ndisinganzwisise kuti dambudziko nderekuti vanofanirwa kuunza vhezheni yakabhadharwa "lts" uye vakwanise kuitenga muno muChile.
Ini ndanga ndichida kuyedza Sailfish OS, zvinoita kunge kwandiri chinonakidza chirongwa, ndingadai ndakazvikurudzira kuti ndiedze pane xioami.